सुनको मूल्य सातामा ४ सयले बढ्यो
माघ १९, काठमाडौं । यो सातामा सुनको मूल्य रू.४ सय बढेको छ भने आइतवार रू. ५७ हजार ४ सयमा किनबेच भएको सुन स्थानीय बस्तु बजारको अन्तिम दिन शुक्रवार बढेर रू. ५७ हजार ८ सयमा किनबेच भएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय बस्तु बजारमा डलर कमजोर भएको तथा रोजगारी दर घटेपछि सुनको भाउमा बृद्धि देखिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले बताएको छ । महासङ्घकाअनुसार अमेरिकी अर्थतन्त्र र राजनीतिक गतिविधि हेर्दा आगामी दिनमा पनि सुनचाँदीको भाउ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
गत साताको अन्तिम दिनमा सुन प्रतिऔंस १ हजार ३ सय ४७ दशमलव ७० डलरमा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर प्रति अमेरिकी डलर १ सय २ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । गत साता चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
सोमवार सूनको मूल्य स्थिर रहेको थियो । मङ्गलवार मूल्य रू.४ सयले घटेर रू.५७ हजारमा सिमित रहेको थियो भने बुधवार रू.२ सयले बढेको थियो । त्यसैगरी बिहीवार सुनको मूल्य रू. १ सयले बढेर रू. ५७ हजार ३ सयमा किनबेच भयो भने शुक्रवार रू. ५ सय बढेको थियो ।